Ny mpanatanteraka fitsangatsanganana dia manantena ny fanarenana ny dia amin'ny 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny mpanatanteraka fitsangatsanganana dia manantena ny fanarenana ny dia amin'ny 2022
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Mahafinaritra ny mahita fanantenana toy izany avy amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana eran'izao tontolo izao satria toa ho tafarina amin'ny fiantraikan'ny Covid-19.
Ireo matihanina fitsangatsanganana zokiolona efatra amin'ny folo dia mihevitra fa hifanaraka na hihoatra ny haavon'ny 2022 ny habetsaky ny famandrihana 2019 manerana ny indostria, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Matihanina efa ho 700 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no nandray anjara tamin'ny tatitra momba ny indostrian'ny WTM ary nanambara ny fomba fijery tsara ho an'ny taona 2022, tsy ny indostria midadasika ihany fa ny orinasany ihany koa.
Raha nanontaniana dia 26% no matoky fa ny famandrihan'ny indostria ho an'ny 2022 dia azo ampitahaina amin'ny 2019, ary ny 14% no manantena ny 2022 hihoatra ny taona ara-dalàna farany alohan'ny fipoahan'ny COVID-19 amin'ny fiandohan'ny taona 2020.
Raha nanontaniana momba ny fahombiazan'ny orinasany manokana, ny matihanina dia nanantena ihany koa, miaraka amin'ny 28% manantena famandrihana hifanaraka amin'ny 2019, ary 16% no manantena ny fitomboana.
Na izany aza, tsy ny rehetra no manantena ny fanarenana amin'ny 2022. Saika ny antsasaky ny santionany (48%) no mihevitra fa ho lavo amin'ny 2019 ny indostria, miaraka amin'ny 11% tsy azo antoka. Ary ho an'ny orinasa tsirairay, ho tolona ny taona 2022, ka ny 42% no manaiky fa tsy mifanaraka amin'ny 2019 ny famandrihana. Ny 14% fanampiny dia tsy azo antoka hoe ahoana no hiafaran'ny taona 2022.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana, WTM London, dia nilaza hoe: “Tena mahafinaritra ny mahita fanantenana toy izany avy amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana eran-tany satria toa miverina amin'ny fiantraikan'ny Covid-19. Ny indostria dia miara-mivory amin'ity herinandro ity ao amin'ny WTM London mba hifanaraka amin'ny fifanarahana ara-barotra izay hamolavola ny hoavin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerantany.